Shuruudaha & Xaaladda - Kiiky
Deeqo waxbarasho oo wadamada
Deeqaha Shahaadada Jaamacadeed
dugsiga esthetician school
Dugsiyada Xanaanada Xoolaha
Dugsiyo Qurux Badan
Dugsiyada Makaanikada Mootada
Dugsiyada Qoob ka ciyaarka
Dugsiga Habaynta timaha
Dugsiyada Nakhshadda Baabuurta
Dugsiyada Tababarka Nolosha
dugsiyada daaweynta duugista
Sida loo noqdo
Noqo Jilaa Cod ah
sida loo noqdo kirishbooy tareen
Youtuber ka noqo
sida loo noqdo dhakhtarka maqaarka
Noqo ugaarsade fadli badan
Noqo sawir qaade
Noqo dhakhtarka wadnaha
Su'aalaha Imtixaanka Layliska
Bogga ugu weyn Shuruudaha & Xaalada
Shuruudaha & Xaalada
Shuruudaha Shuruudaha Madasha Buugaagta Adduunka iyo Xaaladaha ku xusan boggaan, ayaa xukumaya isticmaalka boggaan, oo ay ku jiraan dhammaan bogagga ku jira degelkan.
Shuruudahan ayaa si buuxda u dhaqan galaya isla markaana saameyn ku leh isticmaalka boggaan iyo adoo adeegsanaya Websaydhkaan, waxaad si cad u aqbali doontaa dhamaan shuruudaha iyo shuruudaha halkan kujira oo dhan. Waa inaadan isticmaalin Websaydhkan, haddii aad wax diidmo ah ka haysid mid ka mid ah Shuruudaha iyo Shuruudahan Degdeg ah.
Websaydhkan ayaan loo isticmaali doonin shaqsi kasta oo aan damacsaneyn inuu ku biiro Dugsi Sare oo aan aheyn sanadihii 12
Xaquuqda Xuquuqda ee Xoolaha.
Waxyaabaha aan ka ahayn waxyaabaha aad adigu leedahay, ee aad door bidday in lagu daro Websaydhkan, iyadoo la raacayo Shuruudahan, Madasha Aqoonyahannada Dunida iyo / ama shati-bixiyeyaasheedu waxay leeyihiin dhammaan xuquuqda hantida aqooneed iyo waxyaalaha ku jira Websaydhkan, iyo dhammaan xuquuqahaas oo kale ayaa la keydiyay.
Waxaa laguu siiyay liisanka xaddidan oo kaliya, oo ku xiran xayiraadaha lagu bixiyay shuruudaha, ujeeddooyin ah in la eego waxyaabaha ku jira boggan,
Waxaad si cad u xaddidan tahay oo aad u xaddidan tahay dhammaan waxyaabaha soo socda:
daabacaan wax walba oo Website ah ee warbaahin kasta;
iibinta, faafinta iyo / ama si kale loo iibiyo wax kasta oo Website ah;
bandhigida iyo / ama bandhigida walxo kasta oo Website ah;
adoo isticmaalaya Website-kan sidan oo kale ah, ama laga yaabo, inay waxyeeleyso Website-ka;
Isticmaalida Websitekan si kasta oo saameyn ku yeelata helitaanka isticmaalka Website-ka;
Isticmaalidda Websigaan oo ka soo horjeeda qawaaniinta iyo xeerarka khuseeya, ama qaabka keena, ama keeni kara, waxyeello u geysaneysa Websiteka, ama qof kasta ama ganacsade kasta;
ka shaqeynta xogta macdanta, xog ururin, xog-saarista ama waxqabadyada kale ee la midka ah ee la xiriira Website-kan, ama intaad isticmaalayso Website-ka;
adoo isticmaalaya Website-ka si aad uga qayb qaadatid xayeesiin ama suuq-geyn
Meelaha qaarkood ee Websaydhkan ayaa ka xaddidan helitaanka adigu iyo Madasha Deeqda-waxbarasho ee Adduunka ayaa laga yaabaa inay sii xaddido marin-u-helista adigu adoo galaya aag kasta oo ka tirsan Websaydhkan, wakhti kasta, keligeed iyo ikhtiyaar ahaanba. Aqoonsi kasta oo isticmaale iyo erey sir ah oo aad ku yeelan karto Website-kani waa qarsoodi waana inaad ilaalisaa sirta macluumaadkaas.
Barmaamijka Tartan Aqooneedka Adduunka T&C, “Mawduucaaga” waxaa loola jeedaa maqal, muuqaal, qoraal, sawirro ama walxo kale oo aad dooratid inaad ku soo bandhigto Websaydhkan. Marka la eego Mawduucaaga, adoo soo bandhigaya, waxaad siineysaa Forum-ka Caalamiga ah ee Aqoon-is-weydaarsiga mid aan ka-reebnayn, adduunka oo dhan, oo aan laga laaban karin, oo aan lahayn boqortooyo, ruqsad aan loo adeegsan karin, soo-saarid, la-qabsi, daabacaad, tarjumid iyo u qaybin mid kasta iyo dhammaan warbaahinta.
Qoraalkaagu waa inuu ahaadaa mid adiga kuu gaar ah mana aha inuu ku xadgudbay xuquuqda dhinac saddexaad. Madasha deeq-bixiyaha adduunka waxay xaq u leedahay inay ka saarto wax kasta oo ka mid ah Waxkasta oo ka mid ah Websaydhkaan waqti kasta, iyo sabab kasta, ayadoon la ogeysiin ah.
Websaydhkan waxaa lasiiyaa "sida la mid ah," oo leh ciladaha oo dhan, iyo Madasha Skuullada Adduunku ma muujiso wax metelaad ama dammaanad qaad ah ama dammaanad qaad ah, nooc kasta oo la xidhiidha Websaydhka ama agabyada kujira Websaydhkan. Intaas waxaa sii dheer, ma jiraan wax kujira Websaydhkan oo loo dhisi doonin inuu yahay talo bixin ama talo kugu siinaysa.
Dhacdo ma jiri doonto Madasha deeq-waxbarasho ee adduunka, ama sarkaalkeeda, agaasimayaasheeda iyo shaqaalaheeda, mas'uul kama noqon doonaan wax kasta oo ka dhaca ama si kasta oo ku xiran isticmaalkaaga Websaydhka, in kasta oo mas'uuliyadda noocaas ahi ay hoos imaneyso qandaraas, ciqaab ama haddii kale, iyo Madasha deeq-bixiyaha adduunka, oo ay ku jiraan saraakiisheeda, agaasimayaasheeda iyo shaqaalahoodu mas'uul kama noqon doonaan waxkastoo aan toos ahayn, cawaaqib ama mas'uuliyad qaas ah oo ka soo baxda ama si kasta oo la xidhiidha isticmaalkaaga Websaydhkan.
Waxaad halkan ku cadaynaysaa ilaa heerka buuxa ee Aqoon-isweydaarsiga Caalamiga ah ee ka soo horjeedo wax kasta oo ah mas'uuliyadaha, kharashyada, dalabaadka, sababaha ficilka, magdhawga iyo kharashyada (oo ay ku jiraan khidmadaha qareenka macquulka ah) ee ka soo baxa ama si kasta oo la xiriira ku xadgudubkaaga mid ka mid ah qodobada Shuruudaan.
Haddii shuruudaha shuruudahaas loo arko inay yihiin kuwo aan la fulin karin ama aan sharci ahayn, marka loo eego xeer kasta oo khuseeya, waa in aan loo dulqaadan karin ama aan xaq u lahayn inaysan bixin karin shuruudahaan aan la dabooli karin ama aan la ansixin, guud ahaanna waa la tirtiri doonaa iyada oo aan saameyn ku yeelan shuruudaha soo socda.
Madasha deeq-bixiyaha adduunka ayaa loo oggol yahay inuu dib-u-eegis ku sameeyo Shuruudahan wakhti kasta oo uu u arko inay ku habboon yihiin, iyo adigoo adeegsanaya Websaydhkan waxaa lagaa filayaa inaad dib-u-eegto shuruudahan oo kale si joogto ah si loo hubiyo inaad fahanto dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha lagu xukumayo Websaydhkan.
Golaha deeqaha waxbarasho ee adduunka ayaa loo oggolaan doonaa inay ku meeleeyaan, wareejiso, iyo kala-goyso xuquuqdeeda iyo / ama waajibaadka ku xusan Shuruudahan iyadoon wax ogeysiin ah ama oggolaansho looga baahan yahay. Si kastaba ha noqotee, .ma looma oggolaanayo inaad meeleysid, wareejiso, ama kala-wareejiso mid ka mid ah xuquuqdaada iyo / ama waajibaadka ku xusan Shuruudahan.
Heshiiska oo dhan.
Shuruudahan, oo ay ku jiraan ogeysiisyo sharciyeed iyo iska-hor-imaadyo ka kooban Websaydhkan, waxay ka kooban yihiin heshiiskii u dhexeeyey Madasha Aqoon-is-weydaarsiga Adduunka iyo adiga oo la xiriira isticmaalka boggaan, iyo wuxuu meesha ka saarayaa dhammaan heshiisyadii hore iyo isfahamka ku saabsan isla.
Sharciga Xukunka & Xukunka.
Shuruudahan waxaa xukumaya loona dhisi doonaa si waafaqsan shuruucda dalka Nigeria, waxaadna u gudbineysaa xaddiga u gaarka ah ee maxkamadaha gobolka iyo federaalka ee ku yaal Nigeria xallinta khilaafaadka.
Shaacinta: Boostada waxaa ku jiri kara xiriiriyeyaasha xiriirka, taasoo la macno ah markaad gujiso xiriiriyeyaasha oo aad wax iibsato, waxaan helnaa guddi.
Naqshadeeyay & horumariyey Teknolojiyadda Silicon Africa.